Guddoomiyaha Aqalka sare iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Dooxa – Radio Daljir
Guddoomiyaha Aqalka sare iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Dooxa
Abriil 5, 2019 5:26 b 0
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo wafdi uu hogaaminaayo ayaa waxa ay gaareen Magaalada Dooxa ee Caasimadda Dalka Qadar, halkaas oo siweyn loogu soo dhaweeyey.
Wafdiga oo isugu jira Senataro ,Xildhibaano 10 xubnood ah iyo Hoowl-wadeeno ayaa waxaaa dalkaasi Qatar ay uga qeybgeli doonaan shir weynaha 140 AAD ee Barlamaanada Aduunka(IPU) oo Sanadkiiba mar la qabto.
Shirka ayaa socondoono mudo Isbuuc ah,waxaana la filayaa in guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi uu khudbad dhinacyo badan taabaneysa uu ka jeediyo shirkaas oo diirada lagu saari doono adkeynta iyo xoojinta wadashaqeynta Baarlamaannada Aduunka.
Waa shirkii 140 AAD ee Barlamaanada Aduunka(IPU) oo sanadkan ay martigelineyso dowladda Qatar,waxaana Wafdiga ka socda Dowladda Soomaaliya ay sidoo kale la kulmi doonaan Wakiilada kale ee ka socda Baarlamaanada Aduunka.
Barnaamijka Fanka iyo Sugaanta (Daawo)